Sombulula izinkinga nge-WiFi ku-Mac yakho ngokuphatha uhlu lwamanethiwekhi abhalisiwe | Ngivela kwa-mac
Enye yezinto okumele sicacelwe ngayo ukuthi phatha amanethiwekhi we-WiFi Ku-Mac yethu kungenye yezinto okufanele sizazi hhayi kuphela ngenxa yezinkinga okhiye esibangenisile abangazinikeza kepha ngenxa yokulandela umkhondo esingakushiya kukhompyutha ngokuya ngamanethiwekhi e-WiFi esinawo ixhunywe futhi lokho kungukuthi iMacOS Njengezinye izinhlelo, ishiya umlando ogciniwe wamanethiwekhi e-Wi-Fi esixhume kuwo ngempumelelo.
Kodwa-ke, angibhali le ndatshana ukufundisa ukuthi ungashiyi mkhondo ku-Mac maqondana namanethiwekhi esixhume kuwo, kepha ukwazi ukuphatha amanethiwekhi e-WiFi uma kwenzeka noma zixhuma kwikhompyutha yethu, azisivumeli ukuthi sintante inethi.
Kunezikhathi, futhi ikakhulukazi kumanethiwekhi e-WiFi ezikhungo zemfundo lapho ngisebenza khona, ukuthi ngenxa yamakheli e-IP amaningi iseva iqala ukunikeza izinkinga zokuxhumeka kubantu abase bexhunywe kuyo kakade. Ngakho-ke, okufanele sikwenze ukukhohlwa inethiwekhi yesikhungo, okuvame ukubizwa nge-Red Medusa bese uphinde uqinisekise ngezimpawu zethu.
Lesi yisinyathelo sokuqala okufanele sisicabangele lapho imishini yethu isixhuma kunethiwekhi ethile ye-WiFi. Kumele siphoqe ikhompyutha ukuthi icele ikheli le-IP elisha elizenzakalelayo ukuze sijabulele ukuxhumana futhi. Ngaphakathi kohlelo lwe-Mac, indawo lapho amanethiwekhi we-WiFi aphethwe khona I-Launchpad> Izintandokazi Zesistimu> Inethiwekhi> I-WiFi> Okuthuthukile.
Ewindini elivelayo, singabona wonke amanethiwekhi we-WiFi esixhume kuwo esikhathini esithile, ngakho-ke singaqeda amanethiwekhi uma singafuni ukuthi avele kukhompyutha noma siphathe lezo okufanele sikwazi ukuqhuba inqubo engiyishilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Lungisa izinkinga nge-WiFi ku-Mac yakho ngokuphatha uhlu lwamanethiwekhi abhalisiwe
Izinguquko zesimo se-HomePod futhi zilungiselela ukuthumela